मुग्लिन-नारायणगढ सडक स्तरोन्नति कार्य कहिले सकिन्छ ? – Shirish News
मुग्लिन-नारायणगढ सडक स्तरोन्नति कार्य कहिले सकिन्छ ?
नारायणगढ-मुग्लिन सडक स्तरोन्नति कार्य असारसम्म सक्ने गरी कामलाई तीव्रता दिइएको छ। पहिलो चरणको कालोपत्रे गर्ने काम चैतभित्रै सक्ने तयारी रहेको आयोजनाले जनाएको छ।
निर्माणलाई तीव्रता दिन रातको समयमा हरेक दिन ६ घण्टाका लागि उक्त सडकमा यातायात आवागमन बन्द गरिएको छ।
आयोजनाका सूचना अधिकारी इन्जिनियर शिव खनालले बाटो बनाउन राति १० बजेदेखि बिहान ४ बजेसम्म सवारी आवागमन बन्द गरिएको जानकारी दिए। राति बाटो बन्द गरेर सडक विस्तारका लागि पहाडको चट्टान कटान गर्न सुरु गरिएको छ।
सोह्र किलो, घुमाउने र चेपाङडाँडा गरी तीन ठाउँमा आठ सय मिटर चट्टान कटानको काम सुरु गरिएको छ। पुस १३ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बसेको बैठकले राति ६ घण्टा सडक बन्द गरी निर्माण सुचारु गर्ने निर्णय गरेको थियो। करिब ३३ किलोमिटर सडकमध्ये ६९ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ।
आयोजनाका सूचना अधिकारी खनालले दिउँसो यातायातको चाप बढी हुने भएपछि राति बाटो बन्द गरेर चट्टान कटान गर्न लागिएको बताए। ‘बाटो बन्द नगरी चट्टान कटान गर्न नमिल्ने भयो’, खनालले भने, ‘रातिको समयमा हेर्छौं, यसबाट राम्रो भए निरन्तर हुन्छ, नभए अर्को उपाय लगाउँछौं।’ चैत मसान्तसम्म पहिलो चरणको कालोपत्रे सक्ने उनले बताए। चालु आर्थिक वर्षमा सबै काम सक्ने उनले बताए। आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा खबर छ ।